Izinketho Zokukhangisa Kwempahla yangempela ku-RealtyWW - I-Real Estate Blog - realtyWW:
Izinketho Zokukhangisa Kwempahla yangempela kwi-realtyWW
July 15, 2016 by realWW, Ukubukwa okuphelele:
Siphinde futhi sinikeze nezinsizakalo ezithile ezikhokhelwayo njengokuthi ukukhangisa kwe-premium kuma-Classifieds futhi ukufakwa ohlwini kuwebhusayithi yethu.
Ukufakwa ohlwini kuhlu. Uma unewebhusayithi ethengiswayo futhi ufuna ukufakwa kuhlu lakho kuphinde kushicilelwe ku-RealtyWW futhi nakithi ophathina amawebhusayithi le nketho ingeyakho! Okwakuwukuphela I-30.00 USD njalo ngenyanga uhlelo lwethu luzohlola okuphakelayo kwakho kwe-xml nsuku zonke ukungenisa izikhangiso ezintsha ku-akhawunti yakho yeRealWW. Le nketho itholakala kuphela kuma-proffessionals wezezakhiwo (hhayi ama-portal, agregators, amawebhusayithi ahlukaniswe njll). Ukufakwa kuhlu kokuvumelanisa kuza mahhala nanoma yiluphi uhlelo lokubhalisela lwethu kungatholakala lapha. Imininingwane engaphezulu kungatholakala lapha
Ukufakwa ohlwini inani lingancika kusigaba esikhethiwe nabasebenzisi uhlelo lokubhalisa, kepha kumahhala ezimweni eziningi.
Isimo se-premium kulapho izikhangiso zelebulwa khona ngomaki we-premium bese zibonakala ziphakeme kunezikhangiso zamahhala emiphumeleni yokucinga. Lokhu kukhuthaza ukuthengisa okusheshayo. Isikhathi senketho singaba. Ukuze wenze iprimiyamu yakho yesikhangiso, kuyadingeka ukuthi ukhokhe imali. Imali yamanje yalolu khetho yile: I-1.00 USD ngamahora we-24. Cindezela ku-Checkout
Ukumodelwa kokuhanjiswa kwesimenywa. Ababhali abangabhalisiwe kufanele bakhokhe imali encane yokuhlola - 30.00 USD . Ungaba umbhali obhalisiwe kuphela ngemuva kokushicilelwa kokuthunyelwe kokuqala. Cindezela ku-Checkout
3.6 (72.5%) 8 amavoti
Le entry safakwa ngo Ukukhangiswa Kwezezakhiwo. Bookmark Permalink.
January 10, 2017 Lokusebenza Kwamaselula Kwempahla Lokusebenza - Ukusesha Kwezakhiwo - Ukubheka Kwamakhaya Amazwe Kusuka manje, ukusesha indawo ethengiswayo kuba ntofontofo ngohlelo lokusebenza lwefoni olusha lwangempela ngeRealtyWW. Dlulisa amehlo kuhlu lwezindawo ezithengiswayo noma uhambise isikhangiso sakho sempahla emhlabeni wonke mahhala. Jabulela ukubukwa kwempahla kuwebhusayithi yamazwe omhlaba iRealtyWW Info usebenzisa uhlelo lokusebenza lokusesha izindlu nomhlaba. Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo, Ukutshalwa Kwezezakhiwo, Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo
April 30, 2016 Shicilela Okuthunyelwe ku-realtyWW - I-Real Estate Guest Blog Izindatshana zokuphromotha nokubhuloga kwezivakashi kuyindlela enhle yokwenyusa ukuthengisa kwakho. Ababhali abangabhalisiwe kufanele bakhokhe imali encane yokuhlola - $ 30.00 USD. Ungaba umbhali obhalisiwe we- $ 100.00 USD njalo ngenyanga. Uma (noma inkampani yakho) ungabanazo izindatshana ezihlobene nesibalo sethu ofuna ukusithumela lapha - sicela ulandele leli khasi. Futhi ungazithumela ngokubambelela ku- - [Email protected] kunoma iyiphi ifomathi efanelekile kuwe. Yonke i-athikili (iposi lezivakashi) izothunyelwa ku- […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo